आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल चैत्र ५ गते सोमबार इश्वी सन २०१८ मार्च १९ तारीख चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथी चन्द्रमा मिन राशिमा सुर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चन्द्रउदय – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
सामान्य आर्थीक अभावको सामना गर्नु पर्नेछ । भोग बिलाशका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । टाढाको यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ । स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
दिर्घ कालिन आम्दानिका श्रोत हरु फेला पर्नाले कार्य क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ । अध्यन अध्यापनका माध्यम द्वारा बिशीष्ठ ब्यक्तिहरु सगँको निकटता बढ्नेछ । तपाइको कार्यको अनावश्यक चर्चा बढ्न सक्नेछ साथै शत्रु शबल रहनेछन ।
कार्य प्रतिको लगन शिलतामा भने बृद्यि हुनेछ । सामाजिक कार्यद्वारा मान प्रतिष्ठा प्राप्तीको योग बन्नेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । स्वास्थ सम्बन्धी सामान्य समस्याले भने सताउन सक्नेछ ।